Aha! Jokes, Satire » မွေးမေလေ့နဲ့ အလှတရားး	14
Kaung Kin Pyar says: အောာာ ဂုတလော.. မမချွိတို့ ဒိုင်းယက်ပလန်တွေကို အားကြိုးမာန်တက်လုပ်နေတာ.. မွေးမေ့လေ့ မျက်နှာညိုမှာစိုးလို့ကိုး… ( ဒီလို အမေမျိုး ၃ ယောက်လောက်တော့ လိုချင်သား…၊ ပြောရင်း သတိရလာဘီ…။ နောက်လ တောင်ကြီးသွားပါမြီ.. )
kai says: မွေးမေလေ့..စိတ်ချမ်းသာသွားအောင်.. မိန်းမတယောက်လောက် ကောက်ယူလိုက်ပါလား… ဟမ်..။ :k;
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငမ်။
နှစ်ကူးမှာ ရန်ဖစ်ချင်တာလားဟင်? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: ယူမား
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ်တော့ လာတောင်းမလဲ။
alinsett says: ဒါဆို… ဒီက အပြန်ကျရင်…အလာထက် ၂ဆ ပို ကိတ်တော့မှာပေါ့…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ဆွင် တညား ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ ရပြီပေါ့နော်။
Mike says: .အားမငယ်ပါနဲ့လေ..“လှလို့ဝလို့ပါလား” ဆိုတာပဲချိဒယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျန်းကျန်း
အောင် မိုးသူ says: ခင်ဂွမ်းဂွိပါ ဟိဟိ
ဇီဇီခင်ဇော် says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 85
အတွေးလေး says: စာဖတ်ပြီး စားချင်သောက်ချင်စိတ်များပေါ်လာသဖြင့်ပြန်သွားစားသည်။
ဦးကြောင်ကြီး says: မွေးမေလေ့